‘म ठोकुवाको साथ भन्छु अब जसपाका नेता राजेन्द्र महतोलाई ७ वर्ष जेल’ ! (भिडियो हेर्नुस्) – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/‘म ठोकुवाको साथ भन्छु अब जसपाका नेता राजेन्द्र महतोलाई ७ वर्ष जेल’ ! (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं । जसपाका नेता राजेन्द्र महतो र सांसद सुरशचन्द्र दासलाई ७ वर्षको जेल जिवन र ५ लाख रुपैया सम्मको जरिवाना अनुसार कारवाही हुने दावी सिमाविद्ले गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा सिमाविद्का रुपमा परिचित हेमन्त सेडाईले यस्तो दावी गरेका हुन् ।
उनले राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरेको निर्णय अनुसार यस्तो सजायको ब्यवस्था हुने उनले दावी गरेका छन् । उनले विदेशी नागरिक जसले झुटो विवरण पेश गरेर नागरिकता लिएको छ उनीहरुका लागि गरिएको ब्यवस्था हो । दुई वर्ष सम्म राज्य ब्यवस्था समितिले गरेको छलफल पछि यस्तो ब्यवस्था गरेको छ ।
यो वाहेक समितिले विदेशी वुहारीलाई ७ वर्ष पछि नागरिकता दिने ब्यवस्था पनि गरेको छ । सिमाविद्ले त्यो ब्यवस्था स्वागत योग्य भएको बताएका छन् । अन्य मुलुकमा पनि विवाह गरेर जानासाथ नागरिकता पाउने ब्यवस्था नभएको बताएका छन् । उनले अन्य मुलुकको ब्यवस्था हेरेर नेपालको कानुनमा पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको राय छ ।
छिमेकी मुलुक भारतमा पनि विदेशी नागरिकलाई ७ वर्ष पछि मात्र प्रकृया पुरा गरेर मात्र नागरिकता पाउने ब्यवस्था भएको बताएका छन् । एक हातमा नागरिकता र एक हातमा नागरिकता दिनुपर्छ भनेर नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलले गरेको माग जायज नभएको बताएका छन् ।
उनले राज्य ब्यवस्थामा समितिमा भएको निर्णय अनुसार राजेन्द्र महतो र सुरेशचन्द्र दासलाई कारवाही हुने दावी गरेका छन् । विक्रमसम्मत २०१९ साल देखि २०४७ साल सम्म नेपालमा जन्मसिद्ध नागरिकताको ब्यवस्था नै नभएको समयमा महतोले झुटो विवरण पेश गरेर नागरिकता लिएको उनको दावी छ । नेपालमा ब्यवस्था नै नभएको अवस्थामा उनले नागरिकता कसरी लिए ?
त्यो झुटो विवरण पेश गरेको कारण नागरिकता सम्बन्धि ब्यवस्था अनुसार कारवाही हुने बताएका छन् । सर्लाही जिल्लाको प्रशासन कार्यालयमा महतोको नागरिकताका विषयमा कुनै रेकर्ड छैन, उनले भने । त्यस्तै सुरेशचन्द्र दासको भारतमा घर भएको र रासनकार्ड र भारतको मतदाता समेत रहेकाले उनले दोहोरो नागरिकता लिएर नेपाल विपरित काम गरेको बताएका छन् ।
अविवाहित महिला र एकल पुरुषले पनि भत्ता
अंततः दुधे छोरा छोरी र कतार भएका श्रीमानलाई छोडेर टाप कसेकि,यस्तो अबस्थामा भेटीइन-भिडियो हेर्नुहोस